Fanavaozana vaovao NASA momba ny fandefasana sy fandefasana ny iraka SpaceX Crew-3
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fanavaozana vaovao NASA momba ny fandefasana sy fandefasana ny iraka SpaceX Crew-3
Ny NASA dia manavao ny fandrakofana ny hetsika fandefasana sy famandrihana ho avy ho an'ny iraka SpaceX Crew-3 an'ny masoivoho miaraka amin'ireo mpanamory sambon-danitra mankany amin'ny International Space Station. Ity no iraka fihodinana fahatelo miaraka amin'ireo mpanamory sambon-danitra ao amin'ny SpaceX Crew Dragon ary ny sidina fahefatra miaraka amin'ny mpanamory sambon-danitra, anisan'izany ny sidina fitsapana Demo-2, ao anatin'ny Programa Commercial Crew an'ny masoivoho.
Ny fandefasana izao dia kendrena amin'ny 1:10 maraina EDT Alarobia 3 Novambra, amin'ny balafomanga SpaceX Falcon 9 avy amin'ny Launch Complex 39A ao amin'ny NASA's Kennedy Space Center any Florida, noho ny toetr'andro ratsy eo amin'ny lalan'ny sidina amin'ny Alahady Oktobra. 31, andrana manomboka.
Ny toetry ny toetr'andro manamorona ny lalantsara fiakarana dia antenaina hihatsara amin'ny alarobia 3 Novambra, ary ny vinavinan'ny 45th Weather Squadron dia maminavina 80% ny mety hisian'ny toetr'andro tsara amin'ny toerana fandefasana.
Ny mpanamory sambon-danitra SpaceX Crew-3 an'ny NASA dia hijanona ao amin'ny efitranon'ny ekipa ao Kennedy mandra-pivoakany. Handany fotoana miaraka amin’ny fianakaviany izy ireo ary hahazo fanazavana ara-teknika sy toetr’andro ato anatin’ny andro vitsivitsy.
Ny Crew Dragon Endurance dia nokasaina hiondrana any amin'ny tobin'ny habakabaka amin'ny 11 ora alina Alarobia 3 Novambra. Ny fandefasana sy ny fandrakofana docking dia halefa mivantana ao amin'ny Televiziona NASA, ny fampiharana NASA ary ny tranokalan'ny masoivoho.
Ny sidina Crew-3 dia hitondra ny mpanamory sambondanitra NASA Raja Chari, komandin'ny misiona; Tom Marshburn, mpanamory; ary Kayla Barron, manampahaizana manokana momba ny asa fitoriana; ary koa ny mpanamory sambon-danitra ESA (European Space Agency) Matthias Maurer, izay ho manam-pahaizana manokana momba ny iraka, ho any amin'ny tobin'ny habakabaka mandritra ny iraka siantifika mandritra ny enim-bolana, hijanona ao anaty sambo mandra-pahatapitry ny volana aprily 2022.
Ny iraka Crew-2 miaraka amin'ny mpanamory sambondanitra NASA Shane Kimbrough sy Megan McArthur, JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) mpanamory sambon-danitra Akihiko Hoshide, ary ESA (European Space Agency) mpanamory sambon-danitra Thomas Pesquet dia mikendry ny famotsorana azy ireo amin'ny tobin'ny habakabaka amin'ny alahady. 7 Novambra, hiverina eto an-tany.
Nandalo ny fe-potoana ho an'ny fankatoavan'ny haino aman-jery ho an'ny fitantarana manokana momba ity fandefasana ity. Noho ny areti-mifindra amin'ny coronavirus (COVID-19), mijanona ho mihidy ny tranokala Kennedy Press Site ho fiarovana ny mpiasa sy ny mpanao gazety Kennedy afa-tsy ireo haino aman-jery voafetra izay efa nampahafantarina. Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny fankatoavan'ny media dia azo alaina amin'ny alàlan'ny mailaka: [email voaaro]
Ny fandrakofan'ny misiona SpaceX Crew-3 an'ny NASA dia toy izao (isaky ny Atsinanana):
Talata 2 nov
• 8:45 pm - Manomboka ny fandrakofana ny fandefasana ny Televiziona NASA. Ny NASA dia hanana fandrakofana mitohy, ao anatin'izany ny fandefasana, ny docking, ny fisokafana ary ny lanonana fandraisana.
Alarobia, Nov. 3
• 1:10 maraina - Fanombohana
Mitohy ny fandrakofana ny fahitalavitra NASA amin'ny alàlan'ny docking, ny fahatongavana ary ny lanonana fandraisana. Ho solon'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety taorian'ny fandefasana dia hanome fanehoan-kevitra mandritra ny fandefasana ny mpitarika ny NASA.
• 11 alina - Docking
Alakamisy, Nov. 4
• 12:35 maraina - Fisokafan'ny foy
• 1:10 maraina – Lanonana fandraisana
Fandraisana an-tanana ny fandefasana TV NASA
Hanomboka amin'ny 8:45 alina ny fandrakofam-baovao mivantana amin'ny fahitalavitra NASA TV Talata 2 Novambra.
Ny audio fotsiny amin'ireo kaonferansa vaovao sy ny fandrakofana momba ny fandefasana dia hoentina amin'ny boriborintany NASA "V", izay azo alefa amin'ny laharana 321-867-1220, -1240, -1260 na -7135. Amin'ny andro fanombohana, hetsika "countdown an'ny misiôna", fanisana tsy misy fanamarihana fanombohana TV NASA, dia hotontosaina amin'ny 321-867-7135.
Ny fandefasana ihany koa dia azo alaina amin'ny onjam-peo VHF am-pitiavana eo an-toerana 146.940 MHz sy ny onjam-peo UHF 444.925 MHz, fomba FM, heno ao amin'ny Brevard County ao amin'ny Space Coast.
Fandraisana an-tanana ny fandefasana tranokala NASA
Ny fandrakofam-baovao momba ny iraka SpaceX Crew-3 an'ny NASA dia ho hita ao amin'ny tranokalan'ny masoivoho. Ny fandrakofana dia ahitana ny fampitana mivantana sy ny fanavaozam-blaogy manomboka tsy alohan'ny 10 ora alina Talata 2 Novambra, rehefa mitranga ny dingana manaraka. Ny horonan-tsary sy ny sarin'ny fandefasana on-demand dia ho hita aorian'ny fiaingana. Raha mila fanontaniana momba ny fandrakofana fanisana, mifandraisa amin'ny efitrano famoaham-baovao Kennedy amin'ny: 321-867-2468. Araho ny fandrakofana fanisana amin'ny bilaogy fanombohana ao amin'ny blogs.nasa.gov/commercialcrew.
Amin'ny andro fanombohana, "famahanana madio" amin'ny fandefasana tsy misy fanehoan-kevitra amin'ny fahitalavitra NASA dia halefa ao amin'ny fantsona fampahalalam-baovao NASA TV. Ny NASA dia hanome fahana horonan-tsary mivantana an'ny Launch Complex 39A tokony ho 48 ora alohan'ny handrafetana ny iraka Crew-3. Miandry olana ara-teknika tsy azo inoana, tsy ho tapaka ny fahana amin'ny alàlan'ny fandefasana.
Rehefa velona ny fahana dia ho hitanao ao amin'ny youtube.com/kscnewsroom.
Manatreha fandefasana virtoaly
Afaka misoratra anarana hanatrika ity fanombohana ity na manatevin-daharana ny hetsika Facebook ny mpikambana ao amin'ny vahoaka. Ny programa vahiny virtoaly an'ny NASA ho an'ity iraka ity dia ahitana loharanom-pamokarana voarindra, fampahafantarana momba ireo fotoana mifandraika amin'izany, ary koa hajia ho an'ny pasipaoro vahiny virtoaly NASA (ho an'ireo voasoratra anarana tamin'ny Eventbrite) taorian'ny fandefasana nahomby.
Mijere, Mifandraisa amin'ny Media Sosialy
Ampahafantaro ny olona fa manaraka ny iraka ianao ao amin'ny Twitter, Facebook, ary Instagram amin'ny fampiasana ny tenifototra #Crew3. Azonao atao ihany koa ny mifandray amin'ny fanarahana sy fametahana ireto kaonty ireto:
Ny fandaharan'asa Commercial Crew an'ny NASA dia nanatontosa ny tanjony dia ny fitaterana azo antoka, azo ianteherana ary mahomby mankany sy avy any amin'ny International Space Station avy any Etazonia amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny indostria tsy miankina amerikana. Ity fiaraha-miasa ity dia manova ny tantaran'ny tantaran'ny habakabaka amin'ny alàlan'ny fanokafana ny fidirana amin'ny orbit Earth-low sy ny International Space Station amin'ny olona maro, siansa bebe kokoa ary fotoana ara-barotra bebe kokoa. Ny gara dia mijanona ho lohataona amin'ny dingana lehibe manaraka an'ny fikarohana an'ny habakabaka NASA, ao anatin'izany ny iraka ho avy amin'ny volana ary, any Mars.